Sakafo - Mag tsy mampino
Jereo ny sokajy
Ahoana ny fomba ahazoana ny vidin'ny Nuratrim tsara indrindra
Nuratrim dia voaporofo ara-tsiansa ary vokatra mampihena ny lanjany izay mampiakatra ny haavon'ny angovo, ny metabolism ary manatsara ny fandevonan-kanina. Manjary mora ny miasa ary mandoro kaloria bebe kokoa noho ny fitomboan'ny haavon'ny angovo. Mandritra izany fotoana izany dia mampihena ny isan'ny kaloria i Nuratrim…
Sakafo mpihinan-tsakaiza teti-bolna izay toa lafo fotsiny
Ny olon-drehetra dia tia mankafy sakafo fisakafoanana tsara fa indraindray kosa dia lany vola ianao ary mbola maniry ny hanana an'io tsiro mahafinaritra io mba hampandeha ny tsironao. Rehefa tsy afaka mandeha any amin'ireo tsindrin-tsakafo mavesatra sy lafo vidy ianao dia mitady…
Matsiro hankalazana an'i Gangaur
Ny fotoana lohataona ho antsika eto Angletera dia mety homarihin'ireo atody sôkôla, zanak'ondry frolicking ary ireo ranonorana mivaivay tamin'ny volana aprily izay manambara ny fiafaran'ny ririnina mangatsiaka kokoa, fa any India kosa ity vanim-potoana ity dia mariky ny karazana maro…
Maninona no tokony ato an-trano matetika kokoa?
Ny fandaniana ny fotoanantsika amin'ny fianakaviana manontolo amin'ny toerana fisakafoanana malaza dia hetsika iray izay ankafizin'ny maro amintsika matetika. Na izany aza, matetika isika dia mila mandoa mihoatra ny vidin'ny tsena mahazatra rehefa mila misakafo any amin'ny trano fisakafoanana. Ny fihinanana dia bebe kokoa…
Miverina amin'ny fototra: mandinika indray ny sandan'ny rano
Miaraka amin'ny rivotra sy hazavana, ny rano dia iray amin'ireo perizika ilaina amin'ny fiainana. Izy ireo no mamelona ny fiainantsika ary raha ny tena izy dia zavaboary maro eto ambonin'ny tany no misy rano betsaka. Amin'ny salan'isa, ny olombelona dia misy 70 isan-jaton'ny rano. Voankazo sasany, toy…
Cheese miorina amin'ny karazana ronono telo lehibe
Ny fromazy angamba no vokatra ronono manan-danja indrindra ary ronono avokoa no resahina. Raha tsy misy ronono dia tsy afaka manao sy mihinana fromazy isika. Ny ronono dia ranoka sarotra sy mahavariana izay mamelona ny zaza, ny zaza ary na ny olon-dehibe aza. Iray amin'ireo…
Fanontaniana tsotra 7 nefa manandanja tokony hapetraka amin'ireo mpamatsy kaloria anao
Janoary 28, 2020
Na izany na tsy izany, ny sakafo dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra hahombiazany lehibe. Noho izany, tena zava-dehibe ny fisafidiananao ny mpanome tolotra fikarakarana sahaza ao Calgary. Saingy, rehefa hifandray amin'ny fampakaram-bady azo antoka…
Inona avy ireo lafiny tsara amin'ny fihinana ronono omby voajanahary
Ny ronono omby voajanahary dia salama kokoa noho ny ronono mahazatra. Izy io dia misy asidra matavy omega 3 avo lenta, CLA ary antioxidants. Ho an'ny fitomboana sy fivoarana mahasalama, ny ronono dia heverina ho singa lehibe indrindra amin'ny sakafon'olombelona. Miorina amin'ny angona vao haingana, ny organika…
Mety hijaly amin'ny tsy fifandanjan'ny hormonina ve ianao?
Alohan'ny hiresahantsika ny atao hoe tsy fifandanjan'ny hormonina dia zava-dehibe ny fahalalana hoe inona ireo hormona ary inona no anjara asan'izy ireo ao amin'ny vatana. Ny hormonina dia famantarana simika izay vokarin'ny fihary ao amin'ny rafitra endocrine. Ny rafitra endocrine dia tambajotra iray manontolo…
Café sy trano fisakafoanana: Serivisy 6 hahitana sakafo matsiro
Tianao ve ny trano fisakafoanana tsara? Tianao ve ny sakafo matsiro? Raha namaly ENY ny 2 amin'ireo fanontaniana ireo ianao dia mahaliana sy mahasoa anao ireto fampahalalana manaraka ireto. Alao an-tsaina ange ny fahafinaretany raha ny menio cafe na trano fisakafoanana…